Maxaa Laga Bartay kulankii ay Russia ka Adkaatay Egypt oo Gabi ahaanba Tartanka isaga hartay – Gool FM
Maxaa Laga Bartay kulankii ay Russia ka Adkaatay Egypt oo Gabi ahaanba Tartanka isaga hartay
CR Shariif June 19, 2018
( Russia ) 19 Juunyo 2018. Russia ayaa usoo baxday wareega bug baxda ee koobka adduunkamarkii ay garaaceen xulka Egypt oo gabi ahaanba tartanka macsalaameyay.
Seddaxda gool oo ay ku badiyeen marti galiyaasha tartanka ayaa dhashay qeybtii dambe ee kulanka waxayna ku adkaadeen 3-0.
Xulka Masar oo markii seddxaad ka qeyb galay koobka adduunka ayaa tartanka isaga haray kadib 28 oo aysan cayaarin tan iyo sanadkii 1990-kii.
Habada maxa laga Bartay dheeshan
Siddeeda gool ay xulka Russia ka dhalisay labada kulan ee koobka adduunka ee ka soconaya dalkooda ayaa barbareyay goolashii ay Spain ku qaaday tartankii cayaaraha adduunka ee 2010 oo ay cayaareen todoba dheel.
Goolka Mohamed Salah ayaa la micno ah in xiddigihii ku guuleystay kabaha dahabka ee gool dhalinta Premier ay gool ka dhalinayeen mid kasta oo kamida afartii tartan ee u dambeysay cayaaraha adduunka kuwaa oo kala ah:
2006: Thierry Henry 3 gool 2010: Didier Drogba 1 gool 2014: Luis Suarez 2 gool iyo 2018: Mohamed Salah ooh al goola
Mohamed Salah waa cayaariyahankii seddaxaad ee Masar gool ugu dhaliyay koobka adduunka, kadib Abdelrahman Fawzi 1934 iyo Magdy Abed El Ghani 1990.
Russia oo tartanka martgalinaya ayaa ka dhaliyay siddeed gool waana martigaliyaashii labaad ee goolal badan tartanka ka dhaliya kadib Italy oo 1934 sido kale dhalisay 8 gool.
Russia ayaa dhalisay wax ka badan laba gool koobkan adduunka iyagoo guud ahaan dhaliyay siddeed gool taaso aysan hore u sameyay taramadii ay cayaartay koobka ee 2002 iyo 2014 oo marka la isku daro goolashooda waqtigaas waa 6 gool.
Waxaa jira ilaa haatan shan Otareeto oo la iska dhaliyay koobka adduunka 2018 – marka kaliya ee tartankan ay ka dhashaan Ortareetooyinka ugu badnaa waxay aheyd 1998 waana 6 gool.
Mohamed Salah ayaa kubbadda taagay tiradiii ugu yareed marka loo eego cayaariyahanka kasta qeybta kowaad ee dheesha waana 19 jeer.
Yaa loo doortay xiddigii garoonka kulankii Russia vs Masar?
DEG DEG: Jack Wilshere oo si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu isaga tagayo Arsenal